Fikradaha akhris-qorista ee lagu qiimeeyo Fasalka Afaraad waxaa ka mid ah:
Anoo tixraacaya faahfaahinta iyo tusaalooyinka ku jira qoraalka marka la sharaxayo waxa qoraalka si cad u leeyahay iyo marka laga soo qaadanayo tixraacyada qoraalka.
Go'aaminta mawduuc sheeko, riwaayad, ama gabay ah faahfaahinta qoraalka; go'aaminta fikradda guud ee qoraalka iyo sharraxaadda sida ay u taageerto faahfaahinta muhiimka ah; soo koobista qoraalka.
Si qoto dheer ugu sharraxaya dabeecad, dejin, ama dhacdo sheeko ama riwaayad, iyada oo lagu sawirayo tafaasiisha gaarka ah ee qoraalka; sharraxaadda dhacdooyinka, habraacyada, fikradaha, ama fikradaha qoraal taariikheed, cilmiyeed, ama farsamo, oo ay ku jiraan waxa dhacay iyo sababta, iyadoo lagu saleynayo macluumaad gaar ah oo qoraalka ku jira.
Isbarbar dhigga iyo isbarbar dhigga aragtida laga soo werinayo sheekooyin kala duwan, oo ay ku jiraan farqiga u dhexeeya sheekooyinka qofka koowaad iyo saddexaad; isbarbardhiga iyo isbarbar dhiga akoon hore iyo gacan labaad, oo ay ku jiraan kuwa ama ku saabsan Hindida Mareykanka ee Minnesota, isla dhacdada ama mowduuca; sharaxaya kala duwanaanshaha diirada iyo macluumaadka la bixiyay.
Isbarbardhiga iyo isbarbar dhiga daaweynta mowduucyada la midka ah iyo mowduucyada iyo qaababka dhacdooyinka sheekooyinka, khuraafaadka, iyo suugaanta dhaqameed ee dhaqamada kala duwan, oo ay ku jiraan Hindida Mareykanka; isku-darka macluumaadka laba qoraal oo isku mowduuc ah si wax looga qoro ama looga hadlo mowduuca aqoon ahaan.
Ardaydu waxay muujiyaan xirfadaha farsamada ee akhriska
Ogaanshaha iyo ku dabaqida cod-wadaaga heerka fasalka iyo xirfadaha gorfaynta erayga ee kelmadaha kelmadaha.
Akhris ku saxsan oo kufilan si loo fahmo fahamka; si sax ah u aqrinta qoraalka heerka fasalka iyadoo ujeedo iyo faham laga helayo, iyadoo la adeegsanayo sicir ku habboon iyo muujinta
Qaybaha fikradaha ee mawduucyada ama qoraalada, kuna taageeraya aragtida sababo iyo macluumaad.
Qoraallo macluumaad / sharraxaad si loo baaro mowduuc loona gudbiyo fikradaha iyo macluumaadka si cad.
Sheekooyin iyo qoraallo kale oo hal abuur leh si ay u horumariyaan waaya-aragnimo dhab ah ama male-awaal ah ama dhacdooyin iyadoo la adeegsanayo farsamo wax ku ool ah, faahfaahin sharraxaad leh, iyo taxane dhacdo oo cad.
Ka qaybgal wax ku ool ah wada-xaajoodyo kala duwan oo lala yeesho wada-hawlgalayaal kala duwan oo ku saabsan mawduucyada fasalka 4 iyo qoraallada, adoo ku dhisaya fikradaha kuwa kale isla markaana si cad u muujinaya tooda.
Aqoonso sababaha iyo caddaynta uu afhayeenku bixiyo si loogu taageero qodobbo gaar ah.
Ka warbixi mowduuc ama qoraal kana fogow xatooyada adoo aqoonsanaya ilaha, sheeg sheeko, ama uga sheekeeya khibrad qaab habaysan, adoo adeegsanaya xaqiiqooyin ku habboon iyo tafaasiil, faahfaahin sharaxaad leh oo lagu taageerayo fikradaha waaweyn ama mawduucyada; si cad ugu hadal xawaare la fahmi karo.
Go'aami ama caddee macnaha ereyo iyo weedho aan la garanayn oo macno badan leh oo ku saleysan aqrinta iyo fasalka afraad.